Afrika Mainty · Febroary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Febroary, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Febroary, 2012
Togo 25 Febroary 2012
Kamerona 20 Febroary 2012
Am-bolana maro izao ireo silamo "intégristes" ara-pivavahana (mpifikitra amin'ny fomba nahazatra hatrizay) no nanamafy ny adin'izy ireo amin'ny mponina sy ny repoblika federaly ao Nizeria sady manandrana manitatra ny faritra iasan'izy ireo mankany amin'ireo firenena hafa any Sahel. Miteraka fandalinana ireny fanafihana ireny, sy fijerena akaiky ary fanehoan-kevitra eny anivon'ny tontolon'ny bilaogy hatrany amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina.
Senegal 19 Febroary 2012
Madagasikara 16 Febroary 2012
Madagasikara 14 Febroary 2012
Senegal 13 Febroary 2012
Miaraka amin'ny vanim-potoana mafampàna mialoha ny fifidianana izay iainan'i Sénégal, dia atrehan-dry zareo Senegale koa izao ny fanaovana tsinontsinona ny demaokrasia ka mampanahy ny maro amin'ireo mpanaramaso herinandro vitsivitsy aty alohan'ny fifidianana. Ndeha hampahatsiahivintsika fa i Abdoulaye Wade dia lany ho filohan'ny firenena tamin'ny 2000 ary nanapa-kevitra izy fa mbola hirotsaka indray ho aminà fotoam-pitondràna fanintelony na dia voararan'ny lalam-panorenana aza izany. Marobe ireo Senegale manohitra ny hamelàna azy ho afaka mirotsaka.
Oganda 12 Febroary 2012
Cote d'Ivoire 10 Febroary 2012